तीजमा दोहोरी गीत कि रत्यौली गीत ? जताततै यस्तै सुनिन्छ। तीजका गीत त बजारमा पाइँदैनन्। पछिल्लो समय बजारमा तीज गीतको नाममा बजिरहेका गीतले तीजको मर्म बोल्दैनन्। संस्कृति र परम्पराअनुसार
इन्धनमा किन सधैँ हाहाकार ?
भारतको अघोषित नाकाबन्दीले इन्धनको हाहाकार भयो। देश पूरै समस्यामा थियो। केही बोलिएन। बन्द–हड्ताल हुन्छ, त्यसमा पनि इन्धन आउँदैन, त्यसमा पनि छुट। तर यो आयल निगमले सधैँ पर्याप्त भनिरहेको समयमा
तराईका नदीतटीय क्षेत्रका सारा गाउँबस्ती सधै डुबानमा पर्छन्। बाढीमा डुबेका बालकलाई दाहसंस्कार गर्ने सुख्खा ठाउँ नपाएर उनका अभिभावक नदीमा लगेर बगाउँछन्। कति दुःखद विडम्बनाका खबर बाहिर आउँछन्। सधैँ पूर्वतयारीका
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका काठमाडौं र भक्तपुर शहर जोड्ने सेतुको रूपमा रहेको छ। त्यसैले यहाँ तीव्रगतिमा शहरीकरण भइरहेको छ। विशेष गरी कौशलटार र लोकन्थली क्षेत्रमा घनाबस्ती भइसकेको छ। कौशलटारबाट
निरन्तर परिरहेको पानीका कारण बाढीपहिरोमा परी देशका विभिन्न भागमा ठूलो जनधनको क्षति हुन गएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या सय नाघिसक्यो। बेपत्ता हुनेको संख्याको संख्या कति हुने हो कुनै एकिन
कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँध सम्झौताका ऐतिहासिक पक्ष
नेपाल र भारतबीच भएका कोशी, गण्डकी र महाकाली बाँधको सम्झौताले प्रकृतिलाई नै च्यालेन्ज गरेर पानीको बाहव रोक्न खोज्ने तथा बाटो फेर्न खोज्ने काम भएको छ। पानीको निश्चित दिशा दिएर
विमान नचल्दा तनाव भयो
पर्यटकीय क्षेत्र लुक्लामा रहेको तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा मौसम खराबीका कारण गएको एक साताभन्दा बढीदेखि उडान प्रभावित हुँदा पर्यटक रोकिएका छन्। बाक्लो हुस्सु तथा लगातारको वर्षाका कारण बितेको आठ दिनयता
गोविन्द केसीलाई नमार
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै ११ औं पटक अनशनमा बसेका डा. केसी मर्न लागिसक्दा पनि सरकारले केही कदम चालेको छैन। अधिकारी परिवारलाई तड्पाएर मारिएको नेपालमा डा. गोविन्द केसीलाई पनि
सत्यतथ्य सूचना पाइएन
अविरल वर्षा र बाढीपहिरोबाट भएको विपत्तिको अवस्थामा सत्यतथ्य सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण नभएको पाएको छु। आमसञ्चारका माध्यम, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र सरकारी निकायले दिएको सूचना फरक–फरक आउँदा हामी अन्योलमा परेका
फेवाताल कब्जा गर्न पाइँदैन
फेवाताल कब्जाको कुरा अहिलेको होइन। फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। विभिन्न पटक गरिएका अध्ययनले पनि ताल अतिक्रमण भएको देखाएका छन्। तर यो अध्ययनमा मात्रै सीमित
सम्पत्ति विवरण खोई त प्रमज्यू ?
प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको खबर आउँदा उनलाई लाज लाग्न पर्ने होइन र ? निर्धारित
साउनमा हरियो पोते र चुरा किन ?
नेपालमा भनाइ पनि छ, साउनमा हरियो देख्ने गोरुले सधैँ हरियो देख्छ। शायद हाम्रा कतिपय परम्पराहरु यस्तै देख्न पाइन्छ। कसैले बुझेर गरेका छन्, कसैले बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेका छन्। सही
शिक्षकलाई देश विकासको दरिलो खम्बाको रुपमा लिइन्छ। विश्वको कुरा गर्ने हो भने शिक्षक शब्द लगनशील, इमानदारी र बफादारी पेसाको रुपमा चिनिदै आएको छ। नेपालमा भने शिक्षकलाई तल्लो स्तरबाट हेरिन्छ।
विस्थापित परिवारलाई राहत खोई ?
निरन्तरको वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो खस्न थालेपछि तेह्रथुमका एक दर्जन बढी घर जोखिममा परेका छन्। पहिरोका कारण घर जोखिममा परेपछि म्याङलुङ नगरपालिकाको जिरीखिम्ती र सुर्केका केही परिवार विस्थापित
२०७४ सालस्य नेतागणेन गोजात्रा
हरि ओम् तत्सत् ⁄ हरि ओम् तत्सत् ⁄ हरि ओम् तत्सत् ⁄ काशी काशी हाम्रा नेताले खान थाले दुई महिनाको बासी, भारत वर्षे भारत खण्डे भारतका उत्तर भागे नेपाल
खै क्षतिपूर्ति ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पारित गरेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ आएको छ। तर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ। सेवाप्रदायकले लापरबाही गरे वा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरी सेवा अवरुद्ध
साझा प्रकाशनमा मनपरी
साझाका अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले साझा प्रकाशनमा भइरहेको अनियमितता छानविन गर्न गठित समितिका सदस्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका लेखा अधिकृत भोला पौडेलकी पत्नी नवीना कोइराला पौडेललाई सहायक तृतीय (मुखियासरह)
मुलुकभर ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको धेरै भइसक्यो। गत आर्थिक वर्ष ०७३⁄७४ को नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि
जर्मन मेलामा नेपाली सामान
जर्मनको म्युनिखमा जुन २१ देखि एक महिनाका लागि व्यापार मेला सञ्चालन हुने गर्छ। एक महिनासम्म चल्ने उक्त व्यापार मेलामा स्वदेश तथा विदेशबाट गरी २ सयको हाराहारीमा स्टलहरु राखिन्छन्। नेपाली
ट्राफिक प्रमुख खनाललाई अनुरोध
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल ट्राफिक प्रमुख भएपछि हाम्रो ठूलै अपेक्षा जाम हटोस् भन्ने हो। जाम हुँदा सर्वसाधारण धेरै समस्यामा परेका छन्। समय खेर गइरहेको छ।